Degdeg: Gudoomiye Kaliil oo Gudoomiye Cusub u magacaabay Degmada Garbaharay – Kismaayo24 News Agency
by admin 30th October 2015 30th October 2015 058
Gudoomiyihii Gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kaliil ayaa lagu soo waramayaa inuu goordhaweyd Magacaabay Gudoomiye ay yeelato Degmada Garbaharay kadib markii Gudoomiyihii hore Iimaan Cadow Kaarshe uu ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay gudoomiyenimadii Degmadaasi.
Kaliil ayaa gudoomiyaha Cusub ee Degmada u magacaabay Carabeey Sheekh faarax jaamac Deer oo ay qaraabo dhaw yihiin Iimaan Cadow Kaarshe.
Magacaabida Gudoomiyahan cusub ayaa kusoo aadeysa xilli shalay xaflad xilwareejin oo ka dhacday garbaharay uu Xilka Gudoomiyenimo ee Degmadaasi uu si rasmi ah ula wareegay mudane Nuur Maxamuud Buraale oo maamulka Jubba ugu magacaaban Gudoomiyaha Degmada Garbaaray.
Garbaharay wali waxaa ka taagan muranadii Siyaasadeed ee u dhaxeeyey siyaasiyiin kasoo kala jeeda deegaanada Gedo kuwaas oo ku kala aragti duwan hanaanka loomaray Magaacabidda iyo Xilkaqaadidii Masuuliyiin Heer gobol iyo mid Degmo ee Gobolka Gedo.
TOP NEWS: Dhageyso Ciidamo ka socda UK oo Soomaaliya soo gaaray Maxay tahay Tahay Sababta ay u Yimaadeen?
Daawo Saraakiisha Ciidamada Jubbaland oo arin lagu farxo sameyay….